ढोरपाटन कोभिड अस्पतालमा उपचाररत ४ जना डिस्चार्ज - ढोरपाटन पोष्ट
२०७८ जेष्ठ १२, बुधबार ०६:४०
कोरोना संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएका विरामीहरु मध्ये, ४ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको छ ।
ढोरपाटन नगरपालिकाको बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नेपाल सरकारले स्थापना गरेको ढोरपाटन कोभिड अस्पतालमा उनीहरुको उपचार भइरहेको थियो ।
कोभिड अस्पतालका फोकल पर्सन तथा स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख डा. मिलन मल्लले एक विज्ञप्ति जारि गर्दै,‘कोभिड अस्पतालमा उपचाररत ९ जना मध्ये १ जना गम्भीर अवस्थाका विरामी र अरु ३ जना मध्ययम अवस्थाका विरामी उपचारपछि डिस्चार्ज हुनुभएको छ । डिस्चार्ज हुने मध्येका १ जना हाई फ्लोमा अक्सिजन दिनुपर्ने हुनुहुन्थ्यो भने अरु तीन जनालाई समेत अक्सिजन सहित उपचार गरिएको थियो । ’
कोभिड अस्पतालमा अहिले ५ जना उपचाररत रहेका छन् । उपचारपछि निको भएर फर्कनेहरुमा निसीखोलाका गाउँपालिकाका २ जना र ढोरपाटन नगरपालिकाका २ जना गरि ४ जना रहेको डा. मल्लले जानाकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य केन्द्रमा स्थापना भएको कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन सहितको १० वेड रहेका छन् । थप ५ जनालाई अक्सिजन कन्सनट्रेटर लगाएर उपचार गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ ।
अस्पतालमा साविकको १५ थान ठूलो र ढोरपाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले व्यक्तिगत खरिदमा हस्तान्तरण गरेको ३० थान ठूलो गरि ४५ थान अक्सिजन सिलिन्डर रहेका छन् ।
पछिल्लो समय स्वासप्रस्वासमा समस्या भएका विरामीभई अस्पतालमा आउनेको संख्या बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ । यही रफ्तारमा विरामीको चाप बढ्ने हो भने, यक्ति सिलिन्डरले अपुग हुने भन्दै तत्काल अक्सिजन प्लान्ट निर्माणका लागि ढोरपाटन नगरपालिका लगायत छिमेकी पालिकाहरुले समेत सोंच बनाउनु पर्नेमा अस्पताल प्रशासनले जोड दिएको छ ।
छिमेकी पालिकाबाट पालिकाको लेटरहेडमा हस्ताक्षर गरेर यहाँ विरामी रिफर गर्ने गरिएको छ तर अरु दायित्वमा चासो नदेखाइएको जनाइएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा थपिए १ हजार ५ सय ४९ जना नयाँ कोरोना संक्रमित